Ụlọ - Hinds Feet Farm
Kpọtụrụ anyị: 704-992-1424 (Huntersville) ma ọ bụ 828-274-0570 (Asheville)
Akụkọ ihe mere eme: Akụkọ Puddin
Ụlọ nke Hart
Mmemme ịnya igwe ọgwụgwọ
Na-ekpughe mmerụ ahụ ụbụrụ
Mmemme ụbọchị Virtual
Ụzọ isi tinye aka
Ndị ọrụ afọ ofufo na Intern
NA-anabata ngwa ugbu a
Maka mmemme ehihie na-eme ihe ngosi Tinye ebe a!
A raara onwe ya nye ijere ndị nwere mmerụ ụbụrụ ozi.
Ebumnuche anyị bụ ịbawanye ikike mmerụ ahụ nke ndị mmadụ nwere mmerụ ahụ site na mmemme agbakwunyere, pụrụ iche na nke zuru oke; na-ekwe ka ndị òtù anyị na-achụso ihe omume bara uru ma na-azụlite mmetụta nke ịbụ onye n'ime ụlọ na n'ógbè ndị gbara ya gburugburu. Anyị ga-arụzu ọrụ a site na ihe pụrụ iche, nke na-elekwasị anya na onye, ​​​​mgbe emezigharị, mmemme dabere na obodo.
Lelee akụkọ afọ 2021 anyị
Mmemme ụbọchị na ebe obibi
Ụbọchị Hinds' Feet Farm's na mmemme ebe obibi bụ mgbanwe ngbanwe site na usoro ọgwụgwọ ọdịnala maka ndị mmadụ nwere mmerụ ahụ n'ụbụrụ gaa n'ụdị nke na-anabata usoro ahụike na ịdị mma zuru oke, na-enye ndị otu ike ịrụ ọrụ na ihe pụtara na ndụ mgbe mmerụ ahụ gasịrị. Ndị mmadụ na-enwe mmerụ ahụ ụbụrụ mebere ya, na-ekerekwa òkè na akụrụngwa niile nke mmemme ahụ.
Anyị Mmemme ụbọchị na-elekwasị anya n'inyere onye ọ bụla n'ime ha aka ịchọta "ọhụụ nkịtị" site na saịtị dị ike na mmemme nke obodo na-elekwasị anya na ọgụgụ isi, ihe okike, mmetụta uche, anụ ahụ, mmekọrịta ọha na eze na tupu ọrụ aka ọrụ. Mmemme ụbọchị anyị dị na abụọ Huntersville na Asheville, North Carolina.
Ebe Puddin bụ ụlọ ọgbara ọhụrụ, ụlọ nlekọta ezinụlọ nwere akwa 6 maka ndị okenye nwere mmerụ ahụ ụbụrụ ma ọ bụ nwetagoro. Emebere ụlọ a maka yana ndị ọrụ iji gboo mkpa dị mgbagwoju anya nke ndị chọrọ enyemaka na-agafeghị oke na nke kachasị na ọrụ ha nke ibi ndụ kwa ụbọchị (ADL). Ebe Puddin dị na ogige Huntersville anyị.
Ụlọ nke Hart bụ ụlọ obibi nke akwa akwa 3 akwadoro iji gboo mkpa nke ndị okenye nwere mmerụ ahụ ụbụrụ bụ ndị nọọrọ onwe ha na mmemme niile nke ndụ kwa ụbọchị (ADL), mana chọrọ enyemaka dị nro ma dị oke ala na nlekọta iji rụzuo ọrụ wee nọrọ na nchekwa. Hart Cottage dị na kampos Huntersville anyị.
A na-agba ndị otu mmemme obibi ume itinye aka, na-emekọrịta ihe na sonye na mmemme na-aga n'ihu nke mmemme ụbọchị.
Enyemaka gị dị mkpa
Otu onyinye na-eme ka ụwa dị iche.
Nkwado gị kwa ọnwa ga-enyere anyị aka ịnọgide na-enye mmemme pụrụ iche na nke ọhụrụ maka ndị okenye nwere mmerụ ahụ ụbụrụ na ezinụlọ ha
Pịa Ebe a ka ịmụta otu esi akwado ugbo ụkwụ Hinds!
"Mgbe mbụ m merụrụ ahụ, m na-amali elu gaa n'ebe dị iche iche na-emegharị ahụ. Iwe were m n'ụwa ma chọọ ịla n'ụlọ. N'ikpeazụ, ị ghaghị ịnakwere mmerụ ahụ na mgba gị. Amụtara m ndidi na ndị gbara m gburugburu na onwe m."
"Enweghị m ike ime ihe m na-enwebu, mana m na-achọta ụzọ ọhụrụ na ebe obibi iji nwee ike ime ihe ndị ahụ"
"Emere m ọtụtụ ndị enyi na Ugbo. Ndị ọzọ so na ha niile nwere enyi, ọ na-amasịkwa m ịnọnyere ha. Ọ na-amasịkwa m iso ndị ọrụ na-emekọrịta ihe. Anyị na-enwekwa obi ụtọ ọnụ."
"Enweghị m ike ime nke a naanị m, mana naanị m nwere ike ime nke a. Na, ịnọ nso ndị dị ka m kụziiri m ndidi imeghe anya m na ịhụ ndị ọzọ n'ụzọ ọzọ."
"Ụbọchị mmemme enyela m ndụ m n'ụzọ dị ukwuu. Ha enyela m nnwere onwe zuru oke ime na ịmụta ihe site na mmejọ nke m."
"Usoro omume mmadụ gị nke iwulite nkwanye ugwu, ntụkwasị obi na nkwanye ùgwù n'etiti ndị otu, ndị ọrụ na ndị nne na nna na-enwupụta oge ọ bụla anyị gara."
"Ọ na-eto eto nke ukwuu n'ime afọ ndị a gara aga n'ọtụtụ ụzọ. O nwere obodo na Hinds Feet Farm nke ndị enyi na ahụmahụ ndị na-enyere ya aka ime nke ọma, na-eto eto ma nwee ndụ obi ụtọ."
Akụkọ na Ozi
Zute anyị Huntersville Intern, Maggie!
Nwere ike 1, 2022
Zute Asheville Intern anyị, Alex!
Zute ụlọ ọrụ ahụike jikọrọ aka, Natalia!
Zute mmemme mmemme ụbọchị Huntersville anyị, Lauren!
Debanye aha na listi email anyị!
Nwebiisinka © 2020 Hinds Feet Farm. Ikike niile echekwabara. Kere site Ọdịiche Emepụtara.
Hinds' Feet Farm bụ ọgbakọ 501 (c) 3 anaghị akwụ ụgwọ.